Sahityabatika: कसले बुझेको हुन्छ
कसले बुझेको हुन्छ
पिडा अचानोले जति कसले बुझेको हुन्छ ?
चुहिने छानोले जति कसले बुझेको हुन्छ ?
कसले कसलााई कसरी ठगिरहेछ ?
पाथी र मानोले जति कसले बुझेको हुन्छ ?
गरिबको कसौंडीमा के के पाक्छ भनेर
चुलो ओभानोले जति कसले बुझेको हुन्छ ?
टन्न खान पाईन्छ आमालाई पिरेपछि
यो कुरा सानोले जति कसले बुझेको हुन्छ ?
देश भएर पनि देश नहुनुको पिडा
हामी विरानोले जति कसले बुझेको हुन्छ ?
अग्यौली –४, गोडार नवलपरासी
हालः पुरानो वानेश्वर , काठमाण्डौ